IFirefox Flash iqhekeza ... Khuphela iNgoma eNtsha kaJustin Timberlake | Martech Zone
IFirefox Flash iyabaleka… Khuphela iNgoma eNtsha kaJustin Timberlake
NgoLwesine, Agasti 10, 2006 NgeCawa, Oktobha 15, 2006 Douglas Karr
Oku kunomdla kumhlobo wam olungileyo, uBill Dawson. Usebenzisa iMozilla, yiya ku Iwebhusayithi kaJustin Timberlake.
Uyabona kwaye udlale ingoma yakhe entsha kwindawo ethi, Sexy Back.
Thayipha kuyo malunga: i-cache kwiBhari yeeDilesi kwaye uza kubona zonke iifayile ekubhekiswa kuzo kwiphepha. Ngelishwa kuJustin, abaphuhlisi bakhe beFlash basikhokelela ngqo kwifayile yokukhuphela… ndizifihle kakuhle kufuneka nditsho!
Khangela iphepha .mp3
Ndiyazibuza ukuba zingaphi ezinye iisayithi ezizizimumu kangaka.
I-PS: Andinguye umlandeli kaJustin Timberlake.
Umzi mveliso weMovie III… Mhlawumbi unethemba elithile… Mhlawumbi akunjalo
Oktobha 15, 2006 ngo-5: 25 PM
Kubonakala ngathi abantu balapha e-Justintimberlake.com banoburharha. Ndibambe nje umzila 2, i-sexyback, usebenzisa le ndlela ingasentla. 192kb/s mp3, ukurekhodwa okusemgangathweni kweepopstars zamva nje zeklabhu encinci ditty.
Nantsi into ekulwazi lwe-ID3 yefayile ye-mp3:
Isihloko: Ungakhupheli Le Ngoma
Umculi: U-Al Yankovic ongaqhelekanga
I-albhamu ye-Striaght Outta Lynwood
Oktobha 15, 2006 ngo-7: 52 PM
Iyahlekisa loo nto! Kusekude ukuba babeke apho ukuze wonke umntu afumane, nangona kunjalo. I-Flash ineempawu ezintle zemultimedia ezinokuthi ziphunyezwe ukusasaza iMP3 kwaye ungayibhekiseli ngqo ngolu hlobo.
Ukuba ibinguwe okanye mna, besiza kufuna amagqwetha ukuze sizikhusele kwi-RIAA ngoku!
Okt 21, 2006 ngexesha 7:02 AM
Khumbulani bafo, ayinguye wonke umntu osebenzisa i-intanethi okanye ngakumbi iWebhusayithi kaJustin Timberlakeâ, iyayazi indlela yokwenza oko, bambalwa kakhulu abanokuyenza loo nto, kwaye bafumane iifayile ze-mp3 simahla. ayonto inkulu!
Okt 26, 2006 ngexesha 5:21 AM
Kulungile, mandibe ngowokuqala ukuthetha loo nto http://www.eminem.com imbi njengendawo kaJustin Timberlake. Kodwa ubuncinci http://www.eminem.com umyili wehlise umgangatho we mp3 ukuya kwi 64Kb/s =)
NgoJanuwari 26, 2008 ngo-1:31 PM
Kubonakala ngathi abaphuhlisi baplage umngxuma kwindawo ye-justin timberlake. =(